Ellicott Dredges dia mpanamboatra «dredge» izay mamolavola sy manangana karazan-tserona fanapahana «cutterhead» kely sy salantsalany. Ny dredge-tsika dia afaka manadoka karazana tany sy fitaovana maloto, toa ny fasika, vatokely, silt ary tanimanga.
Ny dredge cutterhead azo entina dia voaorina amin'ny farany, mora ampiasaina ary manome taham-pamokarana tsy misy farany. Ny andian-dredge an'ny Dragon® an'ny Ellicott dia misy dredges suction portable azo entina amin'ny fampiharana dredging maro, toy ny fitrandrahana, ny fanarenana ny tontolo iainana, ary ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny ny morontsiraka.
Portable & maharitra
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=décélteres&oldid=XNUMX '' Ireo sambo maharitra ireo dia manana endrika mavesatra asa izay miantoka ny androm-piainan'ny vokatra lava sy ny famerenam-bola avo kokoa. Ny dredge suction fanapahana finday tsirairay avy dia natao ho an'ny fitaterana tsotra, fivoriambe ary fikojakojana mora foana.
Ny ohatra amin'ny dredge an'ny Portable Cutterhead an'i Ellicott dia misy ny dredge an'ny Ellicott Series 370 Dragon®, mety ho an'ny mpandraharaha dredge voalohany. Ny Series 670 Dragon® Dredge tonga lafatra ho an'ny tetikasa dredging marina sy seranan-tsambo ary manolotra fiara mifono vy feno halavirana ho an'ny fitoniana ary nanampy toerana malalaka. Ho an'ireo mpikirakira dredging mitady dredge izay manome taham-pamokarana avo lenta amin'ny fangatahana lalina tsy misy fahasarotana amin'ny Ladder Pump, ary heverina ho dredge tsara ho an'ny tetikasa fitrandrahana sy fanavotana ny tany, angamba ny Ellicott Series 870JD Jet Dragon® Dredge dia mety ho mety tsara ho an'ny matihanina mpanao dredging. Ny dredges fantsom-bokatra fanapahana rehetra dia natao tao amin'ny toeram-pamokarana any Baltimore, Maryland ary New Richmond, Wisconsin.